Mustafe Cagjar oo ka hadlay sababta ay ciidamada ugu direen gobolka Tigray | Allgalgaduud.Com
Home Dhacdooyinka Todobaadka Mustafe Cagjar oo ka hadlay sababta ay ciidamada ugu direen gobolka Tigray
Mustafe Cagjar oo ka hadlay sababta ay ciidamada ugu direen gobolka Tigray
Mustafe oo wareysi gaar ah siiyay BBC ayaa sheegay in go’aankooda uu ka dambeeyay kadib codsi uga yimid dowladda dhexe oo ku aadanaa in dowlad deegaannada dalka ay ka qeyb qaataan dagaalka looga soo horjeedo jabhadda TPLF.
Waxaa uu intaa ku daray in qorshaha TPLF uu yahay inay “dumiyaan” dowladda dhexe.
“Arrimaha noocan oo kale ah masuuliyadda waxaa leh maamulka [deegaanka]. Maamulka go’aanka uu gaaro ayaa meesha yaala, tashi haddii ay noqoto, haa waan sameeynay tashi ballaaran oo ciddii ay khuseysay waa lala sameeyay,” ayuu intaa ku daray.
“Dadka noocaasi ah waxay isugu jiraan kuwa TPLF taageersan oo ah kuwa mar walba waxa ay TPLF tiraahda ku hadla iyo kuwa daacad ah oo wadaniyiin ah inta badan ku qaldama dhibaatada socota ama laga yaabo in guud ahaan-ba aysan raali ka ahayn ka mid ahaanshiyaha dalka,” ayuu yiri madaxwayne Mustafe.
“Kooxda TPLF taageerta ee Soomaalida ee kuwii deegaanka maamuli jiray iyo kuwa la mid ah waxay aad u jecel yihiin in arrintan ay ka dhigaan mid u dhaxeysa Amxaaro iyo Tigree. Qaabka ay u dhigayaana waa qaabka ay Tigreegu jecel yihiin in loo dhigo. Bil-xaqiiqa dagaalkan waa dagaal dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururka TPLF u dhaxeeya,” ayuu intaa ku daray.